Ukumaketha Kwinjongo, Hhayi Izinhlamvu Zamehlo | Martech Zone
NgoLwesithathu, Januwari 28, 2009 UMsombuluko, May 16, 2022 Douglas Karr
Abadayisi besikole esidala babonakala bevaleleke njalo inani lama-eyeballs. Bengihlale ngingu-database futhi ngikhangisa ngqo, ngakho-ke bengikuthanda ukuthola i- kwesokudla izinhlamvu zamehlo kunokuba ucindezele izikhangiso phambi kwabo bonke.
Amabhizinisi afana ne-Yellow Pages athanda ukubala izinombolo ezinkulu, futhi. Ngifunde kanye lokho Abantu abangama-87% base-US basebenzise ama-Yellow Pages ngo-2007. Ekufundeni imibhalo emihle, lokhu kwacatshangwa ngocwaningo lwefoni. Miningi kakhulu imibuzo edinga ukubuzwa uma othile ekujikijela inombolo enkulu kanjalo, njenge:
Yenziwe ngasiphi isikhathi inhlolovo yocingo?
Babunjani abantu ababuzwa?
Zingaki izinguquko ezenziwe nge-Yellow Page ukusetshenziswa?
Kwakuyini ukubuyiselwa okumaphakathi kokutshalwa kwezimali komkhangisi wekhasi eliphuzi?
Yibaphi abantu abafinyelele kulabo bantu? Ingabe iyafana nenani lenkampani yami elihlosiwe?
Iyini incazelo ye esetshenziswa?
Ukuziba izinombolo ezinkulu, lokho Amakhasi Aphuzi akwenzela kona injongo. Lapho umsebenzisi evula ama-Yellow Pages, bakumishini futhi leyo mishini kungenzeka iholele ekubandakanyeni nomkhangisi.
Izinjini zokusesha zinikela ngokuqina kakhulu injongo. Uma ngifuna "isidlali esihle kakhulu se-mp3", maningi amathuba okuthi ngizobuyekeza futhi ekugcineni ngithenge engikufunayo. Yingakho abaningi kangaka amabhizinisi abhuloga - ukuhlinzeka ngemikhiqizo namasevisi abo ngokubekwa kwenjini yokusesha okuhle kwamagama angukhiye okuthi amafemu nabathengi bawafuna kanjani.
I-Internet Yellow Pages (IYP) ihluke kancane. Lezi zinkomba zebhizinisi ziveza kokubili ukubekwa kwenjini yokusesha okuhle KANYE nezinombolo ezinkulu. Inkolelo yami ukuthi i-IYP empeleni inciphisa ikhono lomthofu ukuxhuma ebhizinisini lakho ngoba kufanele:
Khetha isayithi lakho kusuka enkombeni
Zulazulela kusayithi lakho
Uma uthenga ngokubekwa ku-IYP, uvumela i-IYP ukuthi ibe ngumnikazi nesango lebhizinisi lakho kunewebhusayithi yakho. Ngokwengeziwe, isesheli asikwazi ukumane nje sivele Ukucinga, Land and Guqula - kufanele bazulazule enkombeni. Abathengi namabhizinisi amaningi alahlekelwa ukuguqulwa ngokuchofoza okukodwa kude kakhulu.
Ukuthatha injongo uma kucatshangelwa, hhayi izinombolo ezinkulu, amabhizinisi adinga ukungabaza mayelana nezinkundla zokuxhumana, futhi. Ngibona abantu abaningi bekhuluma ngokuzuza ngempumelelo ibhizinisi kuFacebook. Angingabazi ukuthi likhona ithuba lezentengiselwano lapho, kodwa nginokungabaza mayelana nendaba yesivakashi. injongo ukuthenga.
Ngamafuphi, gwema ukuxokozela futhi ubeke phambili utshalomali lwakho lwe-inthanethi lapho inhloso nethuba likhulu kakhulu:
Qala ngokubeka injini yokusesha okuhle kakhulu - ngokuthuthukisa isitolo sakho se-inthanethi noma ngokuqala ukubhuloga kwezinkampani.
Sebenzisa lokho okuqukethwe ngokusebenzisa amanye ama-social mediums.
Sebenza ngamasu okuthengisa nokugcina ahlanganisayo imeyili Marketing futhi Ukukhangisa Kwamaselula.
Jan 28, 2009 ngo-11: 59 PM
I-athikili ayishongo ngqo, kepha ngizimisele ukubheja ukuthi lolu cwaningo lumboze izingcingo ze-HOME kuphela. Ngokusobala alubandakanyi uhlobo lwabantu abangenazo izingcingo zasekhaya noma abangakhathali ukwenza lokho kuhlola. Ngicabanga ukuthi lokho kuguqula kakhulu umphumela wokugcina wenhlolovo.
Jan 29, 2009 ku-12: 36 AM
Ngivumelana nawe James. Ngihlale ngigxile 'ocwaningweni lwezingcingo' ngoba abantu abaningi ku-intanethi abanayo ifoni yasekhaya, abaphenduli izingcingo zabo zasekhaya, noma empeleni basebenza ngesikhathi lapho ucwaningo luphelile.
Jan 29, 2009 ngo-12: 12 PM
Ngicabanga ukuthi ngingayiphendula imibuzo yakho maqondana nendlela esetshenziswayo yocwaningo lwe-Yellow Pages.
Izingxoxo zenziwa nsuku zonke zonyaka ngaphandle kweMinyaka Emisha, Ukubonga kanye noKhisimusi.
I-medthodology esetshenzisiwe ukudayela kwamadijithi okungahleliwe okusho ukuthi yonke inombolo yocingo yasendlini inethuba elilinganayo lokukhethelwa ucwaningo. Le ndlela iphumela kusampula elivelelwayo kubo bonke abantu abadala base-US.
Abantu abangama-86% abathi babhekise kuMakhasi Aphuzi bathi sebethengile noma bahlose ukukwenza lokho.
Imbuyiselo emaphakathi ekutshalweni kwemali evela ekukhangisweni kwendawo kokubonisa ingu- $ 13 yemali engenayo kuwo wonke ama- $ 1 okutshalwa kwezimali.
Ngenxa yendlela olwenziwa ngayo lolu cwaningo, imininingwane yabantu ifinyelele kwizibuko labantu abadala base-US. Umsebenzisi ojwayelekile we-Yellow Pages ujwayele ukuba ngu-25-49, ikolishi grad, imali engenayo ye-HH> $ 60K, usayizi womndeni> 4, Moved times 3+ ngonyaka odlule, futhi bahlala endaweni yabo yamanje ngaphansi konyaka owodwa.
Incazelo yomsebenzisi umuntu ovula umkhombandlela abuke isikhangiso esisodwa noma eziningi.
Jan 29, 2009 ngo-12: 19 PM
Wow - ngiyabonga ngemininingwane ngale Larry!
Jan 29, 2009 ku-11: 34 AM
Nami ngiyavuma. Sithole ukuthi kufana nalapha e-Information Marketing Institute. Ukuthola amathuba oku-inthanethi kuyindlela okufanele uhambe ngayo. Heck ngaze ngathola eyami ibhulogi ekuqhubekeni. Kuhlole: http://infomarketingstarter.blogspot.com/